के हो सजीवन ? बहुउपयोगी वनस्पति सजीवनका फाईदा यी छन् | कृषि टुडे
के हो सजीवन ? बहुउपयोगी वनस्पति सजीवनका फाईदा यी छन्
सजीवनलाई ठाउँ अनुसार छुट्टा छुट्टै नामले चिने अनुसार पूर्वी नेपाल यो बहु उपयोगी विरुवालाई ‘कदम’भनेर चिनिने गरिन्छ । कहीं सजिवनलाई तरकारीको रुपमा बुझिने गरिन्छ भने कहीं यसलाई उपयोगी वनस्पतिको रुपमा बुझिन्छ । आउनुहोस् अनेकौं फाईदा दिने एक लाभदायक वनस्पतिलाई राम्रो संग चिन्ने प्रयास गरौँ ।
सजीवन / ड्रमस्टिक / मोरिंगा
Sajiwan अथवा Drumstick एक किसिमको तरकारी हो । यो नेपाल र भारत लगायत विभिन्न देशहरुमा पाईन्छ । यसमा प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन, जिनक लगायतका तत्व हुन्छन । उच्च मात्रामा पाईने कोलेस्ट्रोल र सोडियम पाइने यस तरकारीमा एन्टी-ब्याक्टेरियल गुण पनि पाईन्छ ।
Moringa oleifera नामले चिनिने यस मोरिंगालाई पनि ‘ड्रमस्टिक’ वा ‘सजीवन’ नै भनिने गरिन्छ । यसको परिवार ‘Moringaceae’ हो ।
अर्को बोटको रुपमा चिनिने सजीवन
यो नामले चिनिने ‘सजिवन’ को वैज्ञानिक नाम Jatropha curcas हो । यो Euphorbiaceae परिवारमा पर्छ .यसलाई अर्को नामबाट ‘निम्तेल’ भनेर नि चिनिन्छ । प्राकृतिक काल देखि नै उत्पादन हुँदै आएको यो एक बहुउपयोगी वनस्पति हो । घरपालुवा जनावरले यसलाई नखाने हुनाले ‘बार’/छेकबार को रुपमा यसलाई प्रयोग गरिन्छ । यसले राम्रो संग माटो अठ्याएर राख्ने हुनाले यसलाई ‘बायो ईंजीनियरिंग’मा पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ । यसको पात कम्पोस्ट मलको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसका अरु फाईदा यस अनुसार छन् ।
– यसको दानालाई पेलेर निकालेको ‘रस’ (तरल पदार्थ) लाई पोलेको घाउ निको पार्न प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
– यसलाई क्यान्सर प्रतिरोधात्मक वनस्पतिको रुपमा समेत प्रमाणित भईसकेको छ ।
– यसको साना हाँगाको डाठलाई दाँत सफा गर्न र बिउ उज्यालो बनाउनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
– यसको विरुवाले माटोको उर्वराशक्ति बढाउने हुनाले प्राय बारीको छेउ छाउमा लगाउदा राम्रो हुन्छ ।
– यसलाई पछिल्लो क्रममा बायो डिजेलको रुपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । यसको दानामा ३०-४०% सम्म तेलको मात्रा रहेको पैईन्छ भने ३ केजी दानाबाट १ लिटर तेल निकाल्न सकिन्छ ।
– यसको औषधीय गुणमा पातको रस र बिउलाई पेलेर निकालिएको तेल दल्दा चौपायाको जुम्रा मार्न सकिन्छ ।
– हात खुट्टा फुटेको, हिलोले खाएको, लुतो, दाद, पक्षघात, मांसपेशी र जोर्नी दुखेको सन्चो गराउँछ । यसको तेलबाट बत्ति बाल्न र साबुन बनाउन पनि सकिन्छ ।
– तेलबाट ग्लिसिरिन बनाउन सकिन्छ । पातबाट सोत्तर, पत्कर र कम्पोस्ट मल बनाउन यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ यसको पिना मलको रुपमा प्रयोग गर्दा खेत/बारीको माटोको गुण सुधारिन्छ ।
सरकारी तवरबाट डिजेलमा सजीवन मिसाउन सकिने सम्बन्धि अध्ययन गर्न २०७३ सालको असारमा आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव उत्तमप्रसाद नागिलाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो ।
यहि सजीवन संग सम्बन्धित रहेर गाला रातै नामले चर्चित बनेको नेपाली फिल्म ‘नोटबुक’को अत्य तिर केहि सानो अंश राखिएको पनि छ ।
चलचित्र नोटबुकमा सजीवन संग सम्बन्धित सानो अंशको फोटो
सामान्यतया ‘सजीवन’ भनेर चिनिने यस वनस्पतिलाई पूर्वी नेपाल तिर भने ‘कदम’ भनेर भनिने गरिन्छ । जसको वैज्ञानिक नाम Neolamarckia cadamba हो जुन ‘Rubiaceae’परिवारमा पर्दछ । यस वनस्पतिको बारेमा बुझ्न https://www.youtube.com/watch?v=4Li43xqRdK8 क्लिक गर्नुहोस् ।
यस अर्थ सामान्यतया बुझिने ‘सजीवन’ लाई एक बहुउपयोगी वनस्पतिको रुपमा चिनिने गरिन्छ भने सजीवन नै नाममा ‘मोरिंगा’ वा ‘ड्रमस्टिक’ नामको एक किसिमको तरकारीलाई पनि बुझ्ने गरिन्छ ।एक किसिमले बुझिदै आएको सजीवन वनस्पति हो भने अर्को किसिमले बुझिदै आएको सजीवन भनेको तरकारी हो ।
Tags: #सजीवन #मोरिंगा #ड्रमस्टिक
Previous मल अभावले धान रोपाई रोकियो
Next मकैलाई सताउने ध्वाँसे थोप्ले रोग यसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ